KAFAA IIDAYSO — * Dadka waxa ugu jaahilsan qofka sharka sameya khayrkana rajeeya. * Qofku wax uu dhawro waxa ugu wanaagsan diintiisa. * Qoom kasta cadowgooda wuxuu ka adkaadaa marka ay is khilaafaan. * Murugooyinka markay far badtaan way wada dataan. * Naftaaadda hagaaji dadkaa kuu hagaagaya. * Nicmadu waxay ku waartaa shukriga. * Mar mar dadka u booqasho tag wey ku jeclanayaan. * Camal la sameeyo waxa ugu wanaagsan midka la daaÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢imo haba yaraadee. * Rayiga ayey raciyada ku hagaagt. * Kalah waad farxi. * Caddaalad ayaa dadka lagu hantaa. * Maalka waxa barakeeya sakadda. * Saltanada waxa xejiya caddaaladda. * Taajirka fulayga ahi mar kasta wuu khasaaraa. * Rajo waxa ugu wanaagsan Alle oo lagu kalsoonaado. * Nin rag cadowgiisa waa calooshiisa. * Midhaha cilmiga waa cilmiga oo la falgeliyo. * Jaahilku waddankiisa khariib ayuu ku yahay. * Fulaynimada waa nusqaan. * In badan dadaal in yarna ku qanac. * Ciidammadu waa dhufayska wadamadda. * Xadhigga beentu waa mid aad u gaaban. * Wadamaddu waxay ku camirmaan jacaylka wadanka marka la jeclaado. * Dunida waa maal, aakhirna waa camal (dunida waxa lagu faanaa hanti, aakhrina waxa lagu faanaa camalka. * Aabbahaa dhawr inankaaga ayaa ku dhawriye. * Badbaadadu waxay ku jirtaa dhawrsanaanta. * Geesinimadu waa saacad oo la sabro. * Samirku waa furaha guusha. * Samirku waa xeelad. * Runtu waa badbaado iyo sarreyn. * Dulmi lagalo waxa ugu xun qof liita oo la dulmo. * Caddaaladdu waa guul. * Dhawranaantu waa quruxda faqriga. * Shaqadu waa nolol, raaxaduna waa dhimasho. | Africa Times
Home, Inside story, Latest news, Tech news
KAFAA IIDAYSO — * Dadka waxa ugu jaahilsan qofka sharka sameya khayrkana rajeeya. * Qofku wax uu dhawro waxa ugu wanaagsan diintiisa. * Qoom kasta cadowgooda wuxuu ka adkaadaa marka ay is khilaafaan. * Murugooyinka markay far badtaan way wada dataan. * Naftaaadda hagaaji dadkaa kuu hagaagaya. * Nicmadu waxay ku waartaa shukriga. * Mar mar dadka u booqasho tag wey ku jeclanayaan. * Camal la sameeyo waxa ugu wanaagsan midka la daaÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢imo haba yaraadee. * Rayiga ayey raciyada ku hagaagt. * Kalah waad farxi. * Caddaalad ayaa dadka lagu hantaa. * Maalka waxa barakeeya sakadda. * Saltanada waxa xejiya caddaaladda. * Taajirka fulayga ahi mar kasta wuu khasaaraa. * Rajo waxa ugu wanaagsan Alle oo lagu kalsoonaado. * Nin rag cadowgiisa waa calooshiisa. * Midhaha cilmiga waa cilmiga oo la falgeliyo. * Jaahilku waddankiisa khariib ayuu ku yahay. * Fulaynimada waa nusqaan. * In badan dadaal in yarna ku qanac. * Ciidammadu waa dhufayska wadamadda. * Xadhigga beentu waa mid aad u gaaban. * Wadamaddu waxay ku camirmaan jacaylka wadanka marka la jeclaado. * Dunida waa maal, aakhirna waa camal (dunida waxa lagu faanaa hanti, aakhrina waxa lagu faanaa camalka. * Aabbahaa dhawr inankaaga ayaa ku dhawriye. * Badbaadadu waxay ku jirtaa dhawrsanaanta. * Geesinimadu waa saacad oo la sabro. * Samirku waa furaha guusha. * Samirku waa xeelad. * Runtu waa badbaado iyo sarreyn. * Dulmi lagalo waxa ugu xun qof liita oo la dulmo. * Caddaaladdu waa guul. * Dhawranaantu waa quruxda faqriga. * Shaqadu waa nolol, raaxaduna waa dhimasho.
August 30, 2015 Shakir Essa	Leave a comment
———–KA FAAiIDAYSO —
* Dadka waxa ugu jaahilsan qofka sharka sameya khayrkana rajeeya.
* Qofku wax uu dhawro waxa ugu wanaagsan diintiisa.
Qoom kasta cadowgooda wuxuu ka adkaadaa marka ay is khilaafaan.
* Murugooyinka markay far badtaan way wada dataan.
* Naftaaadda hagaaji dadkaa kuu hagaagaya. Nicmadu waxay ku waartaa shukriga
* Mar mar dadka u booqasho tag wey ku jeclanayaan.
* Camal la sameeyo waxa ugu wanaagsan midka la daaÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢imo haba yaraadee.
* Rayiga ayey raciyada ku hagaagt.
* Kalah waad farxi.
* Caddaalad ayaa dadka lagu hantaa.
* Maalka waxa barakeeya sakadda.
* Saltanada waxa xejiya caddaaladda.
* Taajirka fulayga ahi mar kasta wuu khasaaraa. * Rajo waxa ugu wanaagsan Alle oo lagu kalsoonaado.
* Nin rag cadowgiisa waa calooshiisa.
* Midhaha cilmiga waa cilmiga oo la falgeliyo.
* Jaahilku waddankiisa khariib ayuu ku yahay. * Fulaynimada waa nusqaan
* In badan dadaal in yarna ku qanac.
* Ciidammadu waa dhufayska wadamadda.
* Xadhigga beentu waa mid aad u gaaban.
* Wadamaddu waxay ku camirmaan jacaylka wadanka marka la jeclaado.
* Dunida waa maal, aakhirna waa camal (dunida waxa lagu faanaa hanti, aakhrina waxa lagu faanaa camalka.
* Aabbahaa dhawr inankaaga ayaa ku dhawriye. * Badbaadadu waxay ku jirtaa dhawrsanaanta.
* Geesinimadu waa saacad oo la sabro. * Samirku waa furaha guusha.
* Samirku waa xeelad.
* Runtu waa badbaado iyo sarreyn.
* Dulmi lagalo waxa ugu xun qof liita oo la dulmo.
* Caddaaladdu waa guul.
* Dhawranaantu waa quruxda faqriga. * Shaqadu waa nolol, raaxaduna waa dhimasho.